Taiwan & Somaliland oo kala saxiixday heshiis ay iskaga kaashanayaan caafimaadka, tikniyoolajiyadda iyo beeraha! – Banaadir Times
Taiwan & Somaliland oo kala saxiixday heshiis ay iskaga kaashanayaan caafimaadka, tikniyoolajiyadda iyo beeraha!
By banaadir 2nd December 2020 120 No comment
Dawladda Taiwan ayaa hawlgal farsamo ka bilawday Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland Talaadadii iyadoo diirada lagu saaray iskaashiga labada dhinac ee caafimaadka, tikniyoolajiyadda iyo beeraha, sida uu sheegay xafiiska wakiilka ugu sarreeya Taiwan ee Somaliland.
Sida lagu sheegay qoraal uu soo saaray xafiiska wakiilka Taiwan ee Somaliland, xaflad lagu furayay hawshan ayaa lagu qabtay xarunta ay ku leedahay caasimada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay wakiilka ugu sareeya Taiwan ee Somaliland Allen Lou iyo sii hayaha wasiirka arimaha dibada iyo caalamiga ah ee Somaliland Liibaan Yuusuf Cismaan.
“Intii ay socotay xafladda, wufuudda labada dhinac ayaa sidoo kale kala saxiixday heshiis fulin ah oo ku saabsan Mashruuca Horumarinta Caafimaadka Hooyada iyo Dhallaanka si kor loogu qaado iskaashiga labada dhinac” ayaa lagu yiri qoraalka.
Labada dhinacba waxa ay sidoo kale kala saxiixdaan hormarinta ICT-ga iyo mashruuca Beeraha kahor dhamaadka sanadka.
Lou oo ka hadlay intii ay xafladu socotay ayaa sheegtay in Taiwan ay sii wadi doonto in ay la wadaagto khibradeeda si ay uga caawiso Somaliland in ay horumariso daryeelkeeda caafimaad iyo awooda caafimaad isla markaana ay ka faa’iideystaan muwaadiniinta reer Somaliland.
Furitaanka mashruucaan waxaa suurta gashay kadib markii Wasiirka Arimaha Dibada ee Taiwan Joseph Wu iyo dhigiisa Somaliland Yaasiin Xiir Fataroon ay kala saxiixdeen Heshiis Farsamo ee Iskaashi Qaab dhismeedka labada maamul bishii Agoosto 17, markaas oo Taiwan ay ka furatay xafiiska wakiilkeeda magaaladda Hargaysa.
Somaliland waxa ay ku dhawaaqday madax-bannaanideeda 1991-kii ka dib dagaal sokeeye oo ka dhacay Soomaaliya. Waxa ay xafiisyo ku leedahay illaa toban dal, sida lagu sheegay bogga wasaaradda arrimaha dibedda, laakiin looma aqoonsana in ay tahay dal madax-bannaan.
Bishii Febraayo, Taiwan iyo Somaliland waxa ay kala saxiixdeen heshiis lagu dhisayo xafiisyo wakiillo is-dhaafsi ah. Taipei waxa ay xafiiskeeda ka furatay Somaliland Aug 17, halka Somaliland ay ka furatay xafiiskeeda Taipei 9-kii Sebtember.
Golaha Shacabka oo aan kulan yeelan 15-Cishe, haddaba maxaa ugu wacan?
By banaadir 9th April 2021
Golaha Ammaanka oo kulan ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Oo Saakay U Ambabaxay Magaalada Khartoum ee Dalka Sudan